प्रचण्डलाई ‘राम्रो मान्छे’ भन्दा देश निकाला ! - www.sahayatra.com प्रचण्डलाई ‘राम्रो मान्छे’ भन्दा देश निकाला ! - www.sahayatra.com
Home > patrapatrika > प्रचण्डलाई ‘राम्रो मान्छे’ भन्दा देश निकाला !
काठमाडौँ, ६ भदौ– कतार सरकारले गोरखाका ३२ वर्षीय दीपक लामिछानेलाई डिपोर्ट ९देश निकाला० गर्नका लागि पक्राउ गरेको छ ।
उनलाई घरफिर्ती केन्द्र ९डिपोर्टटेशन सेन्टर० मा राखिएको छ । अष्ट्रेलियामा कार्यरत गैरआवासीय नेपाली संघको पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय सदस्य दीपा राईले लामिछानेविरुद्ध दिएको उजुरी उपर छानबिन गरी कतार सरकारले आफ्नो देशमा रोजगार गर्न नपाउने गरी लामिछानेलाई डिपोर्ट गर्न लागेको हो ।
लामिछानेलाई गत मंगलबारमा पक्राउ गरी घर फिर्ती केन्द्र ९डिपोर्टटेशन सेन्टर० मा राखिएको छ । त्यसअघि पनि उनलाई कतारको खोज तथा अनुसन्धान केन्द्र ९एसएफडी० ले पक्राउ गरिसकेको थियो ।
उनलाई एकजना नेपाली कामदारले आफू जमानतमा बसेर आफ्नो राहदानी केन्द्रमा बुझाएपछि सेन्टरबाट बाहिर निकालेका थिए ।
अष्ट्रेलियाको स्थायी बसोबासको अनुमति पाएकी राईले ‘लामिछानेले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमाथि गालीगलौज गरेर कमेन्ट पोष्ट गरेको र कतारमा बसेर राजनीति गरेको’ भन्दै उजुरी गरेकी थिइन् ।
गत जुनको अन्तिम सातामा अष्ट्रेलिया भ्रमणमा जान लागेका नेकपा माओवादी ९केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध राईले आफ्नो फेसबुकमा स्टाट्स पोष्ट गरेकी थिइन् । त्यसउपर लामिछानेले प्रचण्डको बचाउ गर्दै राईको आलोचना गरेका थिए ।
कतारस्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भेटेर एउटा सामान्य कामदारलाई डिपोर्ट नगर्न अनुरोध गरेको हो । ‘हामी नेपाली नगरिकको हितको लागि गर्नुपर्ने सबै पहल गरेका छौं’, कतारका लागि कार्यबाहक राजदूत मणिरत्न शर्माले भने, ‘‘दूतावासले आवश्यक समन्वय काम भइरहेको छ ।’
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नातर्फबाट नामावली पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवानिकट एक नेताले आफ्ना केही मन्त्रीको नाम सोमबारै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पठाउने तयारी भइरहेको खुलाए । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श गर्न बाँकी रहेकाले सोमबार मन्त्रिपरिषद्मा चार वा पाँच सदस्यमात्रै जान सक्ने ती नेताको भनाइ छ ।
दाहाल मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले १२ वा १३ मन्त्रालय पाउने दुई सत्तारुढ दलको समझदारी छ । ‘हाम्रो तर्फबाट केही नाम सोमबार नै प्रधानमन्त्रीकहाँ जाँदैछ, भदौ ८ गते सभापतिज्यू उपचार फ्लोअपका लागि सिंगापुर उड्ने भएकाले त्यसअघि नै पार्टीका तर्फबाट सरकारमा जाने अरु नेताको नामसमेत टुंगो लाग्नेछ,’ ती नेताले भने, ‘सोमबार क्याबिनेटमा जाने नाम पठाउन आवश्यक तयारी गरिसकेका छौं ।’
कांग्रेसले सोमबार पठाउने भनिएका नाममा अर्जुननरसिंह केसी, प्रकाशशरण महत र केशवकुमार बुढाथोकीको चर्चा छ । अघिल्लो पटक चर्चा गरिएका शेखर कोइराला भने सूचीमा पर्ने छैनन् । कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालय दिन देउवा सहमत भए उनको नामसहित अरु नाम पौडेल पक्षले एकै पटक पठाउने बुझिएको छ ।
अरु मन्त्रीबारे मोटामोटी टुंगो लागे पनि महिला, मधेसीलगायत समानुपातिक प्रतिनिधित्व मिलाउनुपर्ने सर्तले गर्दा पौडेल पक्षसँग समन्वय गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने देउवाको तयारी छ । ती नेताले पौडेल पक्षबाट ६ मन्त्रालयको दाबी आएकाले छलफल बाँकी रहेको खुलाए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सम्भव भए सोमबार, नत्र मंगलबारभित्र आफ्नो दलबाट थप मन्त्री आउने पुष्टि गरे । ‘मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ, त्यसलाई अन्तिम रुप दिनुअघि केही छलफल गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ।
Item Reviewed: प्रचण्डलाई ‘राम्रो मान्छे’ भन्दा देश निकाला ! Rating:5Reviewed By: Shesh Narayan Jha